စကျတငျဘာ 11, 2018 – Healthy Life Journal
၊ လရိပ်မေ ၊ စားပွဲတစ်လုံးလို သင်မှီနိုင်မယ့် မျက်နှာပြင်တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ အချိန်တစ်မိနစ်ပေးပြီး ဗိုက်ချပ်အောင် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို ပြုလုပ်ရမလဲ စားပွဲတစ်လုံးကို ကျောမှီပြီး မတ်မတ်ရပ်ပါ။ ပခုံးတွေကို ဖြောင့်တန်းနေအောင်ထားပြီး မေးစေ့ကို ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း မြှင့်ထားပါ။လက်တွေကို ခါးထောက်ပြီး ဘယ်ဘက်လက်ကိုမြှောက်လိုက်၊ ညာဘက်လက်ကို...
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး(ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် ၄။ မက်ဖော်မင်ဘဲသောက်နေပြီး မိမိကိုယ် မိမိစောင့်ရှောက်ခြင်း (Self Care) ကို မလုပ်တတ်ခြင်း၊ မလုပ်ဖြစ်ခြင်း။ ဆီးချိုစင်တာရှိရာသွားရောက်မှသာ လူနာတွေကို “မိမိကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်ခြင်း”များပြုလုပ်နိုင်ရန် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်မိမိ ဘာတွေစောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုရင် . . . (က)...
ချိုင်း(ဂျိုင်း)ဖြူအောင် အာလူးကို သုံးပါ
ချိုင်း(ဂျိုင်း)မည်းတာက အမျိုးသမီးအများစုအတွက် ပြဿနာပါ။ အထူးသဖြင့် လက်ပြတ်ဝတ်ချင်ရင် ချိုင်းမည်းတာက တကယ်အဆင်မပြေပါဘူး။ အာလူးရှိရုံနဲ့ချိုင်းဖြူအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ * အာလူးပါးပါးလှီးပြီး ချိုင်း(ဂျိုင်း)နေရာကို ပွတ်သပ်ပေးပါ။ * ဒါမှမဟုတ် အာလူးကို ကြိတ်ချေပြီး ရလာတဲ့အရည်ကို ချိုင်း(ဂျိုင်း)မှာ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ (Healthy Life...
ပေါင်အကြောတင်းပြီး အသက်ရှူကျပ်တယ် . . .
မေး. ပေါင်အကြောတင်းပြီး အသက်ရှူကျပ်တာ ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါနော်။ ဆုဝတီကျော်ဝင်း မိဆု (FB) ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ပေါင်အကြောတင်းတာနဲ့ အသက်ရှူကျပ်တာက ဆက်စပ်မှုသိပ်မရှိပါဘူး။ ပေါင်အကြောတင်းတာက အာရုံကြောညပ်တာ ဒါမှမဟုတ် ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုများပြီး Spasm ရတာ၊...
အီတလီခေါက်ဆွဲ စပါဂတီစားခြင်း၏ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အီတလီခေါက်ဆွဲ စပါဂတီက ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူအများစားလေ့ရှိတဲ့ ခေါက်ဆွဲတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်၊ ခရင်မ်ဆော့၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်၊ ဆေးဖက်ဝင်အရွက်စတာတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အီတလီခေါက်ဆွဲစပါဂတီ စားတာကြောင့် အောက်ပါ ကျန်းမာရေးကောင်း ကျိုးတွေကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ – စွမ်းအင်ရှိစေခြင်း...
မျက်စိညောင်းညာတဲ့ ဝေဒနာ သက်သာစေမည့် အလွယ်ကုထုံး
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ မျက်စိညောင်းညာတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့- မျက်စိကို ဖွင့်ထားရင်တောင် လေးလံပြီး မသက်မသာခံစားရတာ၊ မျက်စိစပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်တာ၊ မသက်မသာဖြစ်တာ၊ မျက်စိခြောက်သွေ့တာ၊ မျက်စိနာတာ၊ မျက်ရည်ကျတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာနဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ ထိတွေ့ရင်ကျိန်းစပ်စပ်ဖြစ်တာတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ မျက်စိညောင်းညာမှု သက်သာစေရန် (၁) ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ...
ရုပ်ချောလွန်းသည့် သားကြောင့် သံသယ၀င်ခဲ့ရာက ကလေးငယ်ဘ၀က ဆေးရုံတွင် ကလေးချင်းမှားခဲ့ကြောင်း သိရှိ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ရုပ်ချောလွန်းတဲ့သားကြောင့် သံသယ၀င်မိရာက ကလေးချင်းမှားခဲ့ကြောင်း တရုတ်ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်ဟာ ရှာဖွေသိရှိခဲ့ပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ရုပ်မချောတာကြောင့် ဇနီးဖြစ်သူကလည်း သံသယ၀င်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ မျက်လုံးကြီးကြီး၊ နှာတံချွန်ချွန်နဲ့ကလေးဟာ သူတိုနဲ့ ရုပ်ရည်အသွင်အပြင်မတူညီခဲ့ပါဘူး။ DNA စမ်းသပ်ချက်အရ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်...